Sumitomo Fekitori | China Sumitomo Vagadziri, Vatengesi
Triangle Kubata Tungsten Carbide Inoisa Sumitomo TNMG160408N-EX AC630M
Zvimiro: 1) .Original Japan Sumitomo Tool Brand; 2) .Wear kuramba uye hwakareba turusi hupenyu; 3) .Inokodzera simbi & simbi isina simbi & simbi yakakandwa & zvigadzirwa zvisina nonferrous; 4) .High kumhanya uye yakakwirira kunyatsoshanda kucheka; 5) .Kugadzikana uye chengetedzo mune inobereka kutendeuka; 6) .High kuomarara uye pasi kucheka simba; 7) .ISO & ANSI nzvimbo yekunyorera. Magadzirirwo: 1) .Brand: Sumitomo; 2) .Nzvimbo yeKutanga: Japan; 3) .Material: Tungsten Carbide / Hard chiwanikwa / Cermet / CBN; 4) .Kutumira: Pfupi; 5) .MOQ: 10 chidimbu ...
Sumitomo kutendeuka inoisa cemented carbide TPGT090202L-W T1200A
Zvimiro zveSumitomo kutendeuka inoisa cemented carbide 1.Original Sumitomo brand kubva kuJapan. 2.Sumitomo yekushandura inoisa cemented carbide yakakodzera machining simbi. 3.Sumitomo yekushandura inoisa cemented carbide ine zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvekucheka, kugadzira uye kusunga. Kugadzikana uye chengetedzo yeSumitomo yekushandura inoisa cemented carbide iri mukubudirira kutendeuka. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeSumitomo inoshandura kuisa cemented carbide mudura redu ...
Tungsten Carbide Insert CNC Machine Chishandiso Sumitomo inoisa WCMX040208FN ACZ330WCMT050308 FN ACZ330WCMX030208FN ACZ330
Chigadzirwa Kuunzwa kweSUMITOMO Tungsten carbide inopinza Tungsten Carbide Insert CNC Machine Chishandiso Sumitomo inopinza WCMX040208FN ACZ330 / WCMT050308 FN ACZ330 / WCMX030208FN ACZ330 1) .Kukura kukuru uye kuvimbika mushure mebasa 2) .Best hard technical 3). , Yakanyanya kushanda, Yakasimba kugadzikana) 4) .Professional kuongorora uye yakakwira chaiyo 5) .High precison, nyore kutsiva, general use Main Parameter yeSUMITOMO inoisa chinhu zita Sumitomo carbide insert Pl ...
Yekutanga Sumitomo yekucheka maturusi e lathe muchina CNMGDNMGSNMGVNMGWNMGTNMG
Zvimiro zveSumitomo yekucheka maturusi: 1.Original Sumitomo brand kubva kuJapan. 2.Sumitomo yekucheka maturusi akakodzera machining simbi, isina simbi, simbi yakakanda. 3.Sumitomo yekucheka maturusi ane akasiyana zvigadzirwa zvekucheka, kukuya uye threading. 4.Kugadzikana uye chengetedzo yeSumitomo yekucheka maturusi ari mukubudirira kutendeuka. 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.Tine hombe hombe yeSumitomo yekucheka maturusi mudura redu uye tinogamuchira odha yako. Magadzirirwo eSumitomo kucheka t ...
Sumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa kubva kuJapan CNMG120408N-EX AC520U
Zvimiro zveSumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa: 1.Original Sumitomo brand kubva kuJapan. 2.Sumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa yakakodzera machining simbi, simbi isina simbi, simbi yakakanda. 3.Sumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa ine yakawanda yezvigadzirwa yekucheka, yekugaya uye tambo. Kugadzikana uye chengetedzo yeSumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa iri mukutendeuka kunobatsira 5.ISO & ANSI nzvimbo yekushandisa. 6.We tine hombe stock yeSumitomo ISO yekunze kutendeuka inoisa mu